Kutsvaga pamitero yeInternet kumba? Sevha pachiyero chako nezvipiwa izvi | Gadget nhau
Mitengo yeInternet yekufamba uye kuchengetedza
Pasina nguva refu yapfuura, sarudzo kana uchihaya internet dzaive shoma kwazvo. Inononoka ADSL kubatana uko kwakaita kuti isu tishaye kungoedza kuwana peji rewebhu. Neraki, maInternet network akavandudzika uye ikozvino asvika kumhanya kunosvika 1Gb. Asi senguva dzose, mikana yakawanda yekusarudza kubva, zvakanyanya kuoma kuwana sarudzo inoenderana chaizvo nezvatinoda uye inotitendera kusevha. Naizvozvo, nhasi tichaita enzaniso pakati peyakanakisa internet maitirwo ekushambadzira kumba uye kuchengetedza panguva imwe chete.
Chipo chakanakisa: Musha Fiber 100Mb Orange
Mari yakachipa kwazvo: Chete finetwork fiber
Chiyero chakazara kwazvo: 100Mb Fiber Zvakawanda Nhare
Iyo yakanakisa internet chiyero: Yoigo's 100Mb Fiber
Zvino zvatave kuziva kuti kuhaya internet pamba pasina yakagadziriswa, yakachipa uye isina zvachose isarudzo dziripo chaizvo, inguva yekupinda mune iyi nyaya uye kuongorora zvakadzama yega yega yemitengo inopihwa nevashandisi. Wagadzirira Here?
Movistar Inobatanidza 300Mb Movistar 300Mbps € 38 / mwedzi
Mumwe Lowi Fiber 100Mbps € 29.95 / mwedzi
Vodafone Fiber 300Mb 300Mbps € 30.99 / mwedzi
Musha Fiber 100Mb Orange 100Mbps € 30.95 / mwedzi
100Mb Fiber kubva kuMásMóvil 100Mbps € 29.99 / mwedzi
Yoigo's 100Mb Fiber 100Mbps € 32 / mwedzi
100Mb fiber ine Jazztel inoshevedza 100Mbps € / mwedzi
1 Lowi, sarudzo mune ino Vodafone OMV
2 MásMóvil uye yayo yakachipa fiber mitengo
3 Orange Imba Fibra mitengo
4 Jazztel uye yayo nyowani fiber mitengo
5 300 Mb kufamba neVodafone
6 100mb chete fiber yakaenzana neYoigo
Lowi, sarudzo mune ino Vodafone OMV
Kusvika nguva pfupi yadarika, Lowi yaive imwe yesarudzo dzakanakisa kana tichida kuhaya yakachipa internet ine maficha akanaka. Inoshanda pasi penzvimbo yeVodafone network, nekudaro kunze kwekunge iwe uchigara munzvimbo yakavanda kwazvo, unogona kubatsirwa nefibhi kufukidza pasina dambudziko. Mutengo wacho unongova maeuro makumi maviri nematanhatu pamwedzi, uri iwo wakachipa kwazvo mutengo wefiber pamusika.
Uye kana mutengo wacho ukaita sounobatsira, kuchine zvimwe. Iyi mwero haina zvachose, saka tinogona kudonha kana kuchinja chero nguva tisingatyi zvirango kana faindi. Uye ivo havazotibhadharise isu kumisikidza kana chikwereti cheiyo router. Kana mushure mekuverenga izvo zveiyo Lowi's fiber rate iwe haugone kumirira kuti uve nehukama hwako kumba, iwe hauna chinhu asi shandisa iyi link kuti ubate sevhisi yako.
MásMóvil uye yayo yakachipa fiber mitengo
Iyo yeyero opareta yatanga kusimudzira mwero wemusika. Uye panguva ino, zvinoita kunge iri munzira kwayo sezvo yayo fiber uye ADSL zvinopihwa zviri pakati pedzakachipa. Kwe € 29,99 chete pamwedzi tinogona kunakidzwa ne100Mb fiber uye zvisingagumi mafoni kubva kune iyo landline.
Kune ino yakachipa pamwedzi mubhadharo hatizofanirwe kuwedzera chero chimwe chinhu sezvo kuisirwa uye router zvakasununguka mukunyoresa kutsva. Asi kana tichifanira kuziva kuti ine mwedzi gumi nemiviri yekugara, saka kana tichida kushandura mwero nguva ino isati yapera, tinofanirwa kubhadhara chirango.Kuti tiite kontrakiti kana kutarisa kufukidzwa kwefibre yeMásMóvil, Tinokusiya iyi link kuti uzviite nekukurumidza.
Orange Imba Fibra mitengo
Tichitarisa kuburikidza neOrange catalog, takawana iyo Home Fiber mitengo yekuhaya internet kumba uye hapana chimwe chinhu. Aya ma rates akakosha kune avo vanofanirwa kuchengetedza yavo nharembozha kunze kwekubatana kwavo kumba uye vari kutsvagawo yakachipa landline. Kunyanya, inosanganisira zvisingagumi kufona kune nharembozha pamwe nemaminetsi chiuru ekudaidza nhare. Uye nemutengo upi? Zvakanaka kune € 1000 pamwedzi zvese.
Saka kana isu tichida fiber ine Orange kufukidza, zviri nani kuti usafunge nezvazvo. Chibvumirano ichi chiyero nekukurumidza uye nyore kubva pano chaipo.
Jazztel uye yayo nyowani fiber mitengo
Mushure mekushambidza kwayo mufananidzo, Jazztel yakurudzira kuti ichinje iyo fiber mitengo yatinogona kubvumirana. Pamusoro pazvose, kana maorenji mwero asingatitendise, nekuti vanoshanda pasi peiyo imwechete yekuvhara network. Kana isu tichifanira kukurudzira internet-chete chiyero kubva ku. Jazztel, imwe yeakanakisa angave muyero ne100Mb ye symmetric fiber kumhanya uye mafoni. Tinogona kushandisa nharembozha tisingatyi kuwedzera mwero wedu, nekuti zvakare inosanganisira zvisingaverengeke kufona chero nguva uye anoshanda
Mari yako yemwedzi nemwedzi ndeye 28,95 euros pamwedzi, asi izvozvi tave nerombo. Chinhu chekuchengeta mupfungwa kana isu tiri kufunga nezvekuchinja yedu internet kubatana kumba. Kukumbira rumwe ruzivo kana kubvumirana imwe yemitengo yayo, haufanire kuita chero chinhu kunze kwekuwana iyi link.
300 Mb kufamba neVodafone
Kana isu tichida kubvumirana neinternet neavo vanogara vachiita kuti tidzivise matambudziko ekuvhara, hatigone kukanganwa nezveVodafone neayo ONO fiber. Tine mitengo yakati wandei yekusarudza kubva, asi kana tikatsvaga kusashandisa zvakawandisa panguva imwechete yakanaka internet kumhanya, yakanyanya mwero hapana mubvunzo kuti ndiyo Fiber Ono 300Mb.
Chinhu chakanakisa ndechekuti chiyero ichi chine kupihwa mumubhadharo wadzo wemwedzi wega kwemwedzi makumi maviri nemana, matichazobhadhara chete € 24, tichichengetedza anopfuura ma39 euros. Kuti usarasikirwe nechipo ichi, zvese zvaunofanirwa kuita svika ichi chinongedzo kuti chihaye izvozvi.
100mb chete fiber yakaenzana neYoigo
Sezvo Yoigo yapinda mumusika wefiber rate, sarudzo dzehupfumi kana zvasvika pakutsvaga dzakawedzera. Pamitengo mitatu yakapihwa, isu tinokurudzira wepakati nepakati ne300Mb, kunyanya pamutengo wayo uye nekukurumidza.
Tinofanira kuyeuka kuti mwero uyu ane kugara kwemwedzi gumi nemaviri uye iyo chaiyo chirango chekubhadhara kana isu tisingateedzere nayo i100 euros. Uye usazvidya moyo, nekuti kunyoreswa uye kumisikidzwa kuri kwemahara uye hauzobhadhariswa invoice yeaya mazano. Kana iwe uchifarira muyero uyu, unogona kuihaya pamhepo kubva paiyi link nekukurumidza.
Sezvawaona, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvatinazvo kana zvasvika pakubhadhara internet kumba. Uye pamusoro pezvose, sarudzo zhinji dzinotibvumidza kusevha. Iye zvino zvaunoziva zvakanakisa zvazvino kupihwa pamusika mu internet mitengo, chete zvakasara zvakanyanya kuomarara. Sarudza iyo sevhisi yekuhaya. Kana usati uine chokwadi, une mukana wekushanyira iyo Roams muenzanisi uye uwane zvaunoda.